Xavi Oo Doonaya In Thiago Alcantara Uu Dib Ugu Soo Laabto Barcelona.
HomeWararka CiyaarahaXavi oo doonaya in Thiago Alcantara uu dib ugu soo laabto Barcelona.
November 13, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Tababaraha cusub ee Barcelona Xavi ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu dib ugu soo celiyo garoonka Camp Nou ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool Thiago Alcantara .
Isbaanishka ayaa matalay kooxda reer Catalan intii u dhaxeysay 2005 iyo 2013, isagoo ku hormaray nidaamka dhalinyarada ee kooxda ka hor inta uusan u safan 101 kulan kooxda koowaad.
Thiago ayaa markaas todobo sano ku qaatay Germany isagoo la joogay Bayern Munich ka hor inta uusan u dhaqaaqin Liverpool bishii Sebtembar 2020, laakiin waxaa ku adkaatay inuu soo bandhigo qaab ciyaareedkiisa ugu fiican Reds.
Sida laga soo xigtay saxafiga reer Spain Pedro Almeida , Xavi ayaa doonaya inuu xiddiga heerka caalami ee dalka Spain dib ugu soo celiyo Camp Nou, iyadoo tababaraha cusub uu go’aansaday inuu kor u qaado khadkiisa dhexe sanadka soo socda.
Thiago ayaa la dhibtoonayay dhibaato kubka ah marxaladihii hore ee ololaha 2021-22, iyadoo arrintu ay ku xaddidday kaliya shan kulan oo Premier League ah.
Wadar ahaan, 30-sano jirkaan ayaa 37 kulan u saftay Liverpool tan iyo markii uu yimid, isagoo ka qeyb qaatay hal gool iyo hal caawin.